Ngathi | I-Wenzhou Lianteng Packaging Machinery Co, Ltd.
I-Wenzhou Lianteng Packaging Machinery Co, Ltd.
Ingqibelelo, inyanzeliso, intle kunye nokuyila
Yenza inkonzo yeklasi yokuqala kubathengi Yenza izibonelelo eziphezulu kunye namathuba abasebenzi
Wonke umntu, uhlala entliziyweni yam.
I-Wenzhou Lianteng Packaging Machinery Co, Ltd.izibophelele kuphuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kwezixhobo zoomatshini bokupakisha, ingcali yasekhaya ebandakanyeka kukutya, amayeza kunye nezinye izinto ezizenzekelayo zokupakisha iingcingo kumashishini aphambili. U-Lian Teng ukubonelela uyilo, ukwenziwa, ufakelo, ukugunyazisa, uqeqesho, inkonzo yasemva kwentengiso, enje ngenkonzo yoololiwe. I-Lian teng ngoku iphuhlise uyilo, imveliso, ukuthengisa, uphando kunye nophuhliso kwelinye lamashishini aphuculo lwangoku.
Imveliso yethu ephambili kunye nentengiso yokugcwalisa umatshini, isikripthi somatshini wokubhala, umatshini wokuphawula, ikhowudi yomhla wokuprinta izixhobo zoomatshini, oomatshini bokutywina ngokuzenzekelayo, iinxalenye zoomatshini bokucoceka kunye nezinye iiprojekthi. Kunye neemfuno zentengiso kunye nophuhliso, kwaye rhoqo ukuphucula ifilosofi yeshishini, ingqalelo kulwaziso lwebrand, ngoku sele yomelele
Oomatshini bokupakisha basekhaya kunye nezixhobo abavelisi abaziingcali. Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwimizi yobisi, ibhiya, ukutya, amayeza, isiselo kunye nemichiza. Okwangoku iimveliso zithunyelwa ngaphandle eYurophu nase-United States nakuMzantsi-mpuma Asia kunye nemitha yelizwe, ngabathengi abatsha nabadala kunye nenkxaso yoluntu.